Anaa dhufu - Barataa Technologies - Giddu Gala barnootaa fi Odeeffannoo
By Alifu Haji	Creativity, Updates November 23, 2018
Baga nagaan gara marsariitii keenya kanaa dhuftan. Marsariitiin keenya waggaan haaraa kun kan nagaa, jaalalaa fi tokkummaa akka nuuf tahu hawwii qabdu ibsatti.
Marsariitiin haaraa kun qabiyyeewwan gurguddoo sadi irratti xiyyeeffannoo kennuudhaan kan ijaaramteedha. Isaaniis akka armaan gadii kanatti wajjiin haa ilaalluu.
Qabiyyeen jalqabaa inni guddaan marsariitiin tun irratti xiyyeeffattee hojjattu, barnoota kennuudha. Barnoonni marsariitii teenya tana irratti kennamu gaafilee akkamitti, maaliif jedhamaniif deebii kan kennaniidha.
Qabiyyeen 2ffaan marsariitiin tun qabattee dhufte jirtu gola mariiti. Gola kana keessatti, isin martuu itti galmooftanii gaafilee gara garaa wal gaafachuu, kan ka’anii jiraniif deebii kennuu, dookimeentota gara gara faayida qabeeyyii tahan waliif qooduu iddoo itti dandeessaniidha.
Kana malees gola kana keessatti dhimmoota gara garaa irratti yaadota gara garaa kaasuun kan irratti waliin mari’annuudha.
Qabiyyeen xumuraa marsariitiin tun ofirraa qabdu, gola oduuti. Golli kun oduuleen gara garaa, barreeffamoota hubannoof nama gargaaran heddutu keessa dhiyaata.
Eenyullee marsariitii kana irratti beekumsa isaa lammii isaatiif qooduu ni danda’a. Namni beekumsa keessan lammii keessaniif qooduu barbaaddan asirraan yookiin 0964121760 yookiin [email protected] irraan wajjiin haasawuu dandeenya.